अभिमत: एनआरएनका लागि लडाई त विचारको हुनुपर्थ्यो, शरीरको होइन ।
एनआरएनका लागि लडाई त विचारको हुनुपर्थ्यो, शरीरको होइन ।
चितवनका पत्रकार कविकिरण न्यौपाने लगातार जापानको नागोयामा बसेको दुई वर्ष पुग्यो । नियमले उनी एनआरएन जापानको सदस्य हुनुपर्ने हो, तर छैनन् । सार्क मुलुक बाहेकका देशमा १८२ दिनभन्दा बढि बसेका नेपालीले यसको सदस्य बन्न पाउनुपर्ने नियम छ । जसलाई एनआरएन अर्थात् गैर आवासीय नेपाली पनि भन्ने गरिन्छ । तर जापान बसाईको लामो अवधिसम्म उनले न एनआरएन जापानको सदस्य बन्न ईच्छा जाहेर गरे, न त सम्बन्धित संस्थाले उनलाई सदस्य बनाउन प्रेरित नै गरयो । यो बढेको दुरीसंगै गैर आवासीय नेपालीको संगठनको सदस्यका हैसियतमा नसमेटिएका न्यौपाने जस्ता नेपाली जापानमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । यद्दपि उनीहरुको चिन्ता, चासो र भरोसा भने एनआरएनएप्रति बढिरहेको छ ।
यसैक्रममा कविजीले केहि समय अघि नागोया क्षेत्रका नेपालीहरुको सामुहिक मेलमा लेखेको प्रतिक्रियाबाट नागोयाको साधारण नेपाली समाजले एनआरएनएलाई कसरी बुझेका रहेछन् भनेर प्रष्ट हुन्छ । म आफै पनि यो ग्रुपमेलको सदस्य भएका नाताले यसमा हुनेगरेका छलफलका बारेमा मलाई जानकारी पाउन सजिलो हुने नै भयो । न्यौपानेका अनुसार आगामी जुन १२ तारिखमा हुन लागेको एनआरएन नागोयाको क्षत्रीय अधिवेशनको सवाललाई लिएर यहाँ उपलव्ध नेपालीहरुबीच अल्लि समय पहिले वृहद् छलफल चल्यो । आगामी नेतृत्व कसले लिने भन्ने सम्बन्धमा त्यहाँ जुहारी चलेछ । एकापसमा आरोप प्रत्यारोप बढ्दै गएपछि हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भयो । न्यौपानेले लेखेका छन्,“ अधिवेशनको विषयलाई लिएर जापानमा रहेका पुँजीपति, उद्योगी र बुद्धिजीवीहरुको भेलामा हात हालाहालको स्थिति दुःखलाग्दो र लाजमर्दो कुरा हो ।”
संगसंगै न्यौपानेले एउटा दह्रो कुरो पनि उठाए । त्यो के भने,“ एनआरएनए भनेको धनी र हुनेखानेहरुको संस्था मात्रै हो भन्ने आवाज उठिरहेका बेलामा जापानमा रहेका सबै वर्ग र नेपालीहरुबाट पिल्सिएकाहरु नै यो संस्थामा अटाए राम्रो हुन्थ्यो कि ?”
एनआरएनएका अभियानकर्मीहरुबीचको यो “भीडन्त” लाई एनआरएन तोकाइ होकुरिकु क्षेत्रीय अध्यक्ष विजयप्रसाद खनालको अर्को इमेल प्रतिक्रियाले झनै पुष्टि गरयो । अध्यक्ष खनालले पनि यो “भीडन्त” सत्य सावित गरिदिए । उनका अनुसार छलफल भनिएपनि त्यहाँ मदिरापान भएछ । मदिराले लठ्टीएपछि हानाहान हुनु स्वाभाविकै थियो । जसका कारण बोत्तलका शिशा फुटेछन्, पछि प्रहरी पनि आएछन् अनि सबै भागाभाग भएछन् । पैसा नहुनेहरुले चुप लागेर सुनिदिने बाहेक अर्को विकल्प नरहेको भन्दै खनालले अब चाहि एनआरएनएलाई सबै मिलेर राम्रो बनाउन लागिपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । यो सबै “पैसाको कमाल” भएको अध्यक्ष खनालको ठम्याई पनि छ ।
नागोयामा एनआरएन तोकाइ होकुरिकुको १२ गते हुने क्षेत्रीय अधिवेशन यो तेश्रो हो । एनआरएन जापानको नेतृत्व तहमा बसिरहेका, क्षेत्रीय अधिवेशनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका र क्षेत्रीय समितिका पदाधिकारी सम्मिलित “वैठक” मा चलेको यो मारमुङ्ग्रीले आम जनमानसमा पारेको छापलाई पक्कै पनि सकारात्मक ढंगले लिन सकिंदैन । लडाई त विचारको हुनुपर्थ्यो, शरीरको होइन । चुनावी रणनीतिका क्रममा उम्मेदवारी घोषणासंगसंगै नेपाली नेपालीबीच एकापसमा “नाङ्गेझार” पार्ने रणनीतिले कसलाई फाइदा गर्छ र ? पैसाको बलमा नशा र नशाको बलमा दशा निम्त्याउने खेल खेलेर शान्त जापानीका बीचमा “वीर गोर्खाली” बन्ने उनीहरुको कसरतलाई जसो गरेपनि क्षम्य हुन सक्दैन ।
नागोयामा यो विवाद चलिरहँदा एकैछिन सिंगो जापानका नेपालीबीचको कुरो गर्न मन लाग्यो । अहिलेसम्म जापानमा कति नेपाली के गरिरहेका छन् र कस्तो अवस्थामा बसिरहेका छन् भन्ने बारेमा कसैसंग गतिलो तथ्यांक छैन । तर जापानमा रहेका नेपालीहरु तीन वर्गमा विभाजित पक्कै छन् । विद्यार्थी, व्यवसायी र कामदार । विद्यार्थीहरु पनि भाषा पढ्न आएका र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत गरी दुई थरी छन् । धेरै कमाउने र थोरै कमाउनेको नाममा व्यावसायी र कामदार वर्गिकृत छन् । यी सबैको व्याख्या आ–आफ्नो छ । एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार्न सकेका छैनन् । कुक भीसामा आएकाको त कुरै छाडौं, उसलाई त कसैले गन्ने नै भएन । जापानमा भाषा पढ्न आउने सामान्य विद्यार्थीले तिरेको खर्चबाट कन्सल्टेन्सीको “मालिक” बन्नेहरुदेखि कुकले जापान आउँदा तिरेको पैसाबाट “रेष्टुरेण्ट व्यावसायी” बनेकाहरुसम्म अहिले एनआरएनएको चर्का नारा लगाउँदै हिड्दा सच्चा एनआरएनए अभियानकर्ता जापानमा खोज्नैपर्ने भईसकेको छ । एनडिएफको प्रकाशोन्मुख स्मारिका “सूर्योदय”मा एनआरएन जापानका उपाध्यक्ष भूषण घिमिरेले जनाएअनुसार जापानमा रहेका १५ हजार दुई सय ५५ जना नेपालीमध्ये सबैभन्दा बढि चार हजार नौसय ७१ जना त कुक भीसामा आएका रैछन् । यो दुईवर्ष अघिको तथ्यांक हो । तर यो वर्ग अझै एनआरएन जापानमा समेटिन सकेको छैन । यद्दपि यसलाई उदाहरणको रुपमा मात्र लिन सकिन्छ ।
समस्या नभएको क्षेत्र त कतै छैन । संगसंगै समाधान पनि छ । जापानमा आएका नेपाली आफ्नो देशबाट पलायन भएका पक्कै होईनन् । लक्षित उद्देश्य प्राप्तिपछि अधिकांश नेपाल पनि फर्कन्छन् । जापान आउने बाटो पहिचानका सन्दर्भमा हरेकको बाटो अर्थात् “भीसा स्टाटस” फरक हुनसक्छ । तर यसैलाई आधार बनाएर जापानका नेपालीलाई वर्गीकरण गरिनुहुँदैन । सामान्य विद्यार्थीदेखि कुकसम्मको लुकेको प्रतिभा पहिचान गर्नका लागि जापानमा लामो समय व्यतित गरेका नेपालीले मद्दत गर्नुपर्ने भईसकेको छ । गतिलो काम नपाइने, पाएपनि श्रमको मूल्य नपाइने समस्या यहाँ झन् विकराल बन्दैछ । आफ्नो “भीसा स्टाटस” बचाउनका लागि रातदिन किचन कुनामा बसेका नेपालीको समस्या बुझ्ने बेला आइसक्यो । जापानीज भाषाको समस्या उस्तै छ, नेपालीबीच । विद्यार्थीहरुको संस्था नेसाजले अब भाषा नजानेका नवप्रवेशी नेपालीहरुलाई समेटेर हप्ताको एक पटक भएपनि भाषा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाए कति राम्रो हुन्थ्यो । जापानी कानुनमा भुक्तभोगी नेपालीले जापानको रहनसहन र कानुनबारे सामान्य जानकारी दिएदेखि जापान आएका नयाँ नेपालीलाई प्रशासनिक कामकाजमा कति सजिलो हुन्थ्यो । समस्त नेपालीका नाममा गरिने अनौपचारिक भेला, रमाइलो र अन्य औपचारिक कार्यक्रमसंगै समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने वातावरण एनआरएनएले मिलाउनुपर्ने हो । तर गरेको भेटिएको छैन । विगतमा जे जस्तो भएपनि आगामी एनआरएन नागोयाको नेतृत्वले सही कार्यदिसा अपनाएर उदाहरणीय क्षत्रीय समिति बनेर देखाउनुपर्ने भईसकेको छ ।
एनआरएन नागोयाको अधिवेशनको म पनि मतदाता नभई शुभचिन्तक मात्र हुँ । किनकि म पनि कविजी जस्तै सदस्य भईसकेको छैन । यद्दपि सौहाद्रपूर्ण वातावरणका बीच आम सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट नयाँ नेतृत्व चुनियोस् भन्ने आम नेपालीको मान्यता छ । अधिवेशनको दौरानमा भएगरेका “मारामार” ले एनआरएनएलाई मात्र होइन, यहाँ रहेका समस्त नेपालीलाई विदेशीका सामु लाजै लाग्ने परिस्थिति निम्त्याउँछ । हाम्रो क्रियाकलाप सबैले देखिरहेको हुन्छ । किनभने हामी नेपाली जहाँ भएपनि एउटै आकाशमुनि र यहि धर्तीमाथि अडिएका छौं । अन्त्यमा एनआरएन जापान धनी र हुनेखानेहरुको मात्रै संस्था नबनोस् ।
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 12:47 PM
paradarshidaily June 8, 2011 at 8:27 PM
Ye hari, Nihu khojeko ho ? Abhimatpatra ko Site ma Paradarshi Daily ko Link kin hataye ko ha ?
HPP June 9, 2011 at 5:52 AM
hahaha...rakhisake....tara pardarshile news update kina nagareko ho ni??
Krishna Bhetwal June 13, 2011 at 12:03 PM
good one ...ramro chha.....